Maalinta AIDS-Ka Aduunka Oo Maanta Baydhabo Laga Xusay:- (Sawiro) - Awdinle Online
Maalinta AIDS-Ka Aduunka Oo Maanta Baydhabo Laga Xusay:- (Sawiro)
December 1, 2019 (Awdinle Online) –Maanta oo ay ku beegan tahay 01 December ayaa dunida waxaa laga xusuyaa maalinta ay Qaramada Midoobey u asteysan cudurka ee HIV AIDS, iyadoo dalal badan laga xusayo maalintaaan.
Munaasabad lagu maamuusayay maalintan ayaa manta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobalka baay.
Munaasabada waxaa ka soo qeyb galay Agaasimaha Guud ee Wasaradda caafimadka ,Maamulka Degmada Baydhoba, shaqaalaha wasaaradda iyo bahda Caafimaadka Gobolka,
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, sida Muqdisho, Hargeysa iyo Garowe waxaa lagu qabtay xafladdo iyo kulamo looga hadlayo cudurka AIDS-ka iyo dhibaatadda uu dadka ku hayo.
Cudurkani ayaa sanadkiiba ku dhaca dadyow fara badan, waxaana sanadihii dambe lagu arkayey dalal uu kamid yahay Soomaaliya iyo wadamo kale oo Afrika iyo Aasiyaba ka tirsan.
Dalalka horumaray ayaa weli wada helitaanka dawooyin lagu ciribtiro cudurkan, marka laga soo tago kuwa kaalmaati ah oo qofka jiritaankiisa sii joogteyneysa inta loogu talagalay in uu sii noolaanayo ee loo qadaray.
Dr. xuseen maxamed haadir “HAADI” oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimha guud ee wasaaradada caafimadka dowlad goboleedka konfur galbed somaliya oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay halista cudurka iyo sida loogu baahanyahay in bulshada looga wacyigeliyo.
Dr. “HAADI” ayaa sheegay in cudurkani uu yahay dilaa, islamarkaana ay u geeriyoodeen malaayiin dad ah, isagoo intaa ku daray in cudurkani uu aad ugu yaryahay dalkeena, wuxuuna hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay in bulshada laga wacyigeliyo cudurkan.
Wuxuu sheegay Dr. “HAADI” in Tobankii sano ee ugu dambeeysay uu cudurkan hoos u dhacay, taasina waxa ay ku timid ayuu yiri, dadaal farabadan iyo wacyigelin dheeraad ah oo la sameeyay dadka.
Gadomiye ku xigeenka maamulka Iyo Maaliyada Degmada Baydhabo Dr Yusuf bare ayaa sheegay in muhiim ay tahay bulshada in laga wacyi gelyo in ay jinsi fuquuq ku sameeyaan dadka qaba cudurkan, wuxuuna tilmaamay Dowladda in ay ka go’an tahay in bulshada la gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin.
Dhowrkii sanno ee la soo dhaafay waxaa la sameeyay horumar ku aadan sidii cudurkan lagu ciribtiri lahaa. Hay’adda QM u qaabilsan cudurkan ee UNAIDS ayaa dajisay qorshe cudurkan lagu soo dhameynayo ugu danbeyn 2030.
Previous articleShirka Horumarka Dhalinyaradda Soomaaliyeed Oo Muqdisho Ka Furmay
Next articleWareegtooyin: Madaxweynaha Somaliland oo isku shaandheyn sameeyay.